Iyo nyowani BlackArch Linux yatove neinopfuura zana nemazana mashanu ekupinda maturusi | Linux Vakapindwa muropa
Kuparadzirwa kwakakurumbira BlackArch Linux ichangobva kuburitsa nyowani yekuisa vhezheni, chifananidzo cheIOO chinobatanidza zvese nhau dzichangoburwa dzekuparadzirwa pamwe nekubatanidzwa kwemidziyo mitsva yekupinda uye kubira kwetsika.
BlackArch Linux sekumwe kugoverwa senge Kali Linux vanozvipira pakupa anobiridzira kana kudzidza nzvimbo yeLinux inoperekedzwa nematurusi uye zvinoshandiswa zvinongotarisisa kubiridzira kwetsika. Sezvo isu tichiona kubva kuzita, BlackArch Linux yakavakirwa paArch Linux, asi ine lightweight interface iyo inoshandisa mashoma zviwanikwa.
BlackArch Linux iri kuburitsa kuburitsa kugovera, ndiko kuti, inovandudzwa pasina kudiwa kwekumisikidzwa nyowani, kunyangwe maisheni ekumisikidza achigara achidikanwa, ndosaka iyi vhezheni itsva yaburitswa iyo inosanganisa matinji ekupinda uye ekudzosera kumashure.
BlackArch Linux ine huru gwara rekutanga nehunhu kubira
Pamusoro peaya maturusi BlackArch Linux ine yekuchengetedza mamaneja maviri ewindo (Openbox neFluxBox) ayo anoshandiswa muchimiro pamwe nehunhu hwekupaza gwara uye kushandiswa kwekuparadzira uko inotarisirwa kune vanonyanya kushandisa vashandisi. Iri gwaro rinogona kuwanikwa pa webhusaiti yepamutemo yeprojekti, pamwe nemifananidzo yekurodha pasi uye zvinokurudzirwa zvakanyanya kune vashandisi vanotanga munyika ino, kwete munyika yeGnu / Linux asi munyika yehunhu hwekuba.
Basa rehacker harifanirwe kunge rakaipa kana zvisiri pamutemo, vabiridzi vazhinji vanoedza kuridzidzisa uye zvinoita sekunge vagadziri veBlackArch Linux vane muganho mumwe chete, kunyangwe isingazivikanwe nemunhu wese nenzira iyoyo. Chero zvazvingava zvakanaka kuti kwatove nematuru anopfuura chiuru nemazana mashanu emabasa aya, zvishandiso zvichatibatsira kuti tinzwisise zvirinani iyo Gnu / linux inoshanda sisitimu uye kushomeka kwayo kana simba Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo nyowani BlackArch Linux yatove neinopfuura zana nemazana mashanu ekupinda maturusi
Nzira yekuwana isina kurema system neDebian Netinstall